Taageerada Wadamada khaliijka taag ma loo hayaa!!! | BARMUUDO.COM
Sunday, March 29th, 2015 | Posted by webmaster | 8 views
Taageerada Wadamada khaliijka taag ma loo hayaa!!!
Waxaa la yiri hadda ka hor ayaa nin faruuran waxaa uu ka safray dhulkii uu ku noolaan jiray ayadoo aysan jirin sabab keentay inuu magaaladiisa isaga hayaamo uuna megaalo kale aado, faruureey wuxuu tagay magaalada Barbara xilli kadib ayaa magaaladaas waxaa ku arkay nin ay isku magaalo ahaayeen oo waydiiyay “faruureey maxaa Barbara ku keenay”? faruureey wuxuu ninkii ugu jawaabay “faduul” oo uu ula jeeday ma jirto wax dan ah oo inta I keentay laakiin faduul iyo wareeg ayaan u imid.
Sheekadaas faruurey oo kale waxay hadda haysataa dowladda soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay waday taageero ay ku garab istaagaysay dowladda sucuudiga oo ay ka dhexeyso saaxiibtinimo aysan u jeedin dadka Soomaaliyeed.
Asbuucii tagay ayay ahayd markii dowladdu ay war kasoo saartay xiriirkii u dhexeeyay wadamada Sucudiga iyo Swedan oo xumaaday ayadoo dowladdeenu ay barbar istaag u muujisay Sucuudiga, mar labaad dowladdu waxay taageertay xulufada dowladda sucuudigu uu hor kacayo oo weerarka ku haya xuutiyiinka Yemen ka dagaalamaya ayadoona taageertay duqaymaha lagu wado dagaalyahanada Shiicada ah ee reer Yemen.
Ayadoo dowladda Soomaaliya ay sucuudiga taageertay ayaa hadana dalka Yemen waxaa ku nool Soomaali qaxooti ah oo aad u fara badan kuwaas oo aan ku noolayn wadan carbeed oo kale, sucuudiguna wuxuu xataa qaxootinimo u aqoonsadaan iska dhaafe waxay tarxiil ku hayaan dadkii wadankaas ka xamaalan lahaa.
Maxay tahay sababta wadamo noo kala fiican aan ugu kala hiilinayno?
Dowladda soomaaliya waxaa taas badalkeeda laga rabay inay warqad u diraan Dowladda sucuudiga una sheegaan inaysan raali ka ahayn duqaymahaas ay ka wadaan Yemen maxaa yeelay waxaa ku nool qaxooti Somaaliyeed oo laga yaabo in weerarkaas dhibaato kasoo gaarto.
Bulshada somaaliyeedey muxuu yahay go’aankiina hadalkaa ka soo baxay dowladeena?
Qaranimadeenu waa in ay ka weynaataa danta gaar ah iyo hiilo caadifadeed waa waxa illaa hada naloo aamini la’yahay hadaa nahay bulshada Soomaaliyed oo dhan.
Annigu wali warkaas waan qaadan la’ahay koleey ee ay wasaarada arimaha dibadda soo saartay iyo danta dadkeena iyo dowladeena ugu jirto.
Sucuudiga waa kuma Bulshadeena somaliyeedse Muxuu kamuteestay?!!!.
Sida bulshada somaliyeed wada ogsoon tahay qofna aan sharaxaad badan uga baahneyn kadib burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya 1991 kii bulshadeena Soomaaliyeed waxaa ku habsaday dagaalo sokeeye gaajo iyo qax baahsan kaas oo illaa iyo maanta socdo.
Dalka sacuudiga illa xiligaas iyo maanta oo eey taariikhdu tahay 29 Maarso 2015 hal qof oo Soomaali ah oo qoxooti ahaan ugu nabad galay majiro maalin kasta waxeey soo daad gureeyaan oo soo tarxiilaan kumannaan Soomaali ah oo caruur,haween iyo duqow u badan, dhallinyaro warkood habasheegin.
Kaliya Janaayo iyo Febraayo 2014 sacuudiga wuxuu wadankiisa kasoo tarxiilay 12,000 kun oo qof waa mudo laba bilood ah oo kaliyah sida ku cad report kan o eey soo saartay human rights watch :
waxa kasii daran dhibta eey u geestaan ciidamada sacuudiga gabdhaha somaliyeed ee tahriibka kutagay.
Bilkasta xabsiyada sacuudiga waxaa ku dhax ummula kuna dhax dhinta gabdho Soomaliyeed iyo duqey marna ma eeysan ka hadlin dowladda SOomaAliyeed . vedio lasoo dhigay barta internet ka ee uu so duubay wiil Soomaali ah oo ku jiray xabsiga sacacuudiga bishii lasoo dhaafay ayaan waxaan ka fiirsaday oday qiyaas ahaan 80 jir uu kusheegay ee ku dhax dhintay xabsiga oo beerkiisa matagay isbitaalna loo diiday in la geeyo kadibna oo halkiisa ku geeriyooday sheeko maahan waa wax aad fiirsan karto.
Halkaan bal eeg https://www.facebook.com/video.php?v=768945986534449&amp;set=vb.425228660906185&amp;type=2&amp;theater
Dowlada Soomaaliyeed marna kama hadlin dhibkaas bulshadeeda lagu hayo wasaaradda arimaha dibaddana warqad ma eysan kasoo saarin xattaa canbaareynba alla haka dhigee
Yaman iyo shacabkeeda maxaaa naga dhexeeya?
Dowladda Yeman iyo Soomaaliya waxeey xariir qoto dheer wada saxiixdeen december 18, 1960. Si kastaba ha ahaatee kadib Burburkii dowladii dhexe kadib Yeman waxeey sii ilaalisay xiriirkii walaaltinimo safaaraddii Soomaaliyeed ee kutiil Yemana marna ma xirmin waxaaa ku qaxay wadanka Yeman kumanaan kun oo Soomaali qaxooti ah, siwanaagsan ayaana loogu soo dhaweeyay intii karaankooda ah. qof dib eey usoo tariixiileena majiran Qofkii Soomaali ah ee qaxooti ahaan kujoogana dhib badan ma uusan qabin qofkii shaqa ka abuuran karana waa uu ka abuurtay sida dadka Sooomaaliyeed loogu soo dhaweeyay Yeman dowlad carbeed oo shacabkeena sidaa usoo dhaweeysay majirto.
Maanta oo aan hadalkaan qorayo waxaa 29 march 2015 dalka Yeman waxaa ku sugan 250,000 laba baqol iyo konton kun oo qaxooti Soomaaliyeed ah, waa inta Diwaanka ku jirta ee la ogyahay sida aan ka daawaday TV-ga Aljazeera . Qaxootigaas hadeer kusugan Yeman dhib aan qaxootinima aheyn ma qabaan cid ku haysata maxaa wadankaan u joogtaana majirto. Yaan cadow loo sameeynin shacabka Soomaaliyeed ayadoon waxba loo qaban Karin ama laga difaaci karin.
Maxaa keenay taagerida sucuudiga ?
Su’aalaha ay dadku iswaydiinayaan waxaa ka mid ah sababta dowladdeenu ay ku taageertay dowladda sucuudiga ayadoo waliba aan lagu soo duulin ee weerarka ayadu qaaday ma Muslinimada ayaa lagu taageeray?
Haday arintu tahay Sucuudigu waa Muslim sunni ah xuutiyiintuna waa Shiico ama Swedan waa wadan aan Muslim ahayn maxaa diiday in dowladdu ay cambaarayso weerarada reer Israel ay ku hayeen falastiiniyiinta oo waliba tan Yemen ka xanuun badnayd?
Dowladda Sucuudigu haday ahaan lahayd wadan nooga fiican wadamada kale arin xun ma ahaateen in la taageero laakiin wadamadii qaxootigeenu daganaa haddii lagu diro oo cadaawad loo muujiyo wadankoodiina aysan kusoo laaban Karin oo amnigiisu wali uusan fadhin maxaa laga faa’iiday taageeradaas oo aan dhib ahayn? bal adiguba is weeydii?
Midda kale sucuudigu waa wadan lacag haysta wuxuuna awood u leeyahay inuu dhammaan Soomaalida qaxootiga ah dib u dajin u sameeyo laakiin ma samayn wuxuuna cadaawad u muujiyay dadkii shaqada wadankooda u doontay. Oo aad ka arki kareeysid maalinkasta tarxiilka lakeeno xamar iyo diifta kamuuqata dadkaas.
Badbaadinta qaxootiga Yemen iyo tala soo jeedin
Ayadoo dadkeena qaxootiga ah ee ku sugan Yemen ay halis ugu jireen dagaalada ka socda wadankaas oo walwal uu ka haystay in loo beegsado Sunninimo ayaa hadana waxaa ugu sii darsamay in dowladdoodii ay taageertay isbahaysiga weerarka kusoo qaaday Xuutiyiinta.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee wadankaas waxay ku badbaadi karaan ayay ila tahay fikir ahaan sedax arimood
1. In dowlada Soomaaliyed eey ka gaabsato waxaa ka socda Yeman oo hadeey ka hadashana dhib mooyee dheef kusoo kordhineeynin shacabka Soomaaliyeed.
2. In warkeena uusan gaarin dagaalyahanada reer Yemen oo warbaahintu aysan buunbuunin
3. Dadka reer Yemen ay noo arkaan inaan nahay wadan aan waxba kusoo kordhinayn weerarka oo aan iska nahay dameeri dhaan raacday oona sida saxda oo aa nahay waaba hadey sidaa inoo fahmaane.
Ayadoo la rabay dowladdu intaysan go’aankaas qaadan inay fiiriso xaaladda dadka laakiin marba hadday tiitiin u abuurtay dadkii Soomaaliyeed ee qaxootiga ahaa waxaa la gudboon inay dadkaas soo daad gurayso intaysay dhibaato soo gaarin .
Waxaan rabaa inaad kusoo koobo qormadaan maahmaah Soomaaliyeed iyo riyo uu ku riyooday Burhan Ali hadaan ku hormaro riyada waa sidan “Xalay manaam baa la i tusay. Waxaa la i tusay Ciidamada Kumaandooska Soomaaliyeed waa ciidanka sida Raha u booda, u ugaarsada sida Haramcadka u hiinraaga sida Libaaxa, Maska ku qadeeya, dhagxaanta isaga dajiya, shuguxa(jayga) ku luqluqda, siligana ku findhicisha oo ku duulaya Qabaal miigan oo baacsanaya Xuutiyiinta. Waxay lahaayeen: Bal annaga iyo Shiico xaggeen iska soo galnaa?
Manaamka dhexdiisa ayaa la igu yiri: War kuwaan maxaad u soo kiciseen miyaydaan dhulkan nolol ka rabin? Maxaa jira ayaan ugu jawaabay codkii ila hadlayey? Waxaa la igu yiri miyaadan arag siday u kharaabiyeen dhulkoodii? Takhasuskoodu waa baabi’inta, bara kicinta, nabad diid ka, kala dambayn la’aanta iyo ka ganacsiga hoogga, silica iyo saxatiirta ka dhalata fal dhaqankoodii. Miyaadan arag kuwa siligyada qaxootiga ootay, kuwa dillaala iyo kuwa ku dawarsada. Waxaan iri illeen ummaduhu qolo walba waxbay takhasus ku tahay!
FG: waa riyo mahmaandana waa “jeeniga dambe hadduu kan hore dhaafo waa uu jabaa” marka taageerada aan waxbana inoo soo kordhineeyn dhib mooyee naga dhaafa. Taariikh dana waa qorantahay.
Email . deeqaxmad15@hotmail.com
Short URL: http://barmuudo.com/?p=10649
Posted by webmaster on Mar 29 2015. Filed under Wararka. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry